ငါဒါလူငယ်လက်ထပ်ပြီးအဘယ်ကြောင့်: From My Wife's Perspective — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အကြောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကငါဒီတော့လူငယ်လက်ထပ်ပြီးအဘယ်ကြောင့်ရှေးရှေးပြောပြဘလော့ဂ် wrote. ငါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသခင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြောင်းကိုပိုမိုသမ္မာကျမ်းစာစဉ်းစားရန်ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့သူကဖတ်နှင့်ကြှနျုပျ၏ပဌနာခဲ့သောသူအပေါင်းတို့အနေဖြင့်တုံ့ပြန်မှုများကအားပေးအားမြှောက်ခဲ့သည်. သင်ဒီမှာကထွက်စစ်ဆေးကြောင်းမူရင်း post ကိုဖတ်ရဘဲနေလျှင်: အဘယ်ကြောင့်ငါအိမ်ထောင်သည်ဒီတော့လူငယ် Get ခဲ့?
ကောင်းပြီဤမျှလောက်များစွာသောရှေးရှေးငါ့ထံသို့ထွက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ကြောင့်ထိုသူတို့အဘို့အဘယ်သို့ထောကျအကူပွုခဲ့ပြောတယ်, ငါကငါ့ဇနီးစေမယ့်အဖြစ်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ထင်, ဂျက်စီကာ, သူမ၏ရှုထောင့်ကနေတူညီတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေ. ဒီတော့ဒီမှာက. အဘယျသို့ကြှနျုပျ၏မယားဒီတော့လူငယ်ကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လုပ်? သူမကပြောပါတယ်…
ငါပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်တွေ့သောအခါ, ငါအချိန်မရွေးမကြာမီလက်ထပ်အပေါ်စီစဉ်မခံခဲ့ရ. သို့သော်အလွန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မှစ. ငါတို့သည်ထွက်သွားကြ၏, သူ့ကိုငါအကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိခဲ့သိထား. သူကကိုယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုငါ့အသက်အရွယ်၌တခါတစ်ခါမျှမယ့်လမ်းအတွက်ဧဝံဂေလိတရားကိုအကြောင်းအသည်းအသန်ခဲ့သည်. ငါသည်လည်းချိန်းတွေ့အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောပညာရှိတဲ့ရှုထောင့်နှင့်အတူသူတစ်ဦးဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဘယ်တော့မှ. ကောလိပ်ကျောင်းရှေ့တော်၌မိမိကတပည့ကျေးဇူးတင်သူကဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောဆက်ဆံရေးမျိုးတူသငျ့သ​​ညျထိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့ထင်အတိအကျသိ.
ငါပထမဦးဆုံးမှာဒီနှင့်အတူရုန်းကန်ကြောင်းဝန်ခံပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသိပ်လေးနက်နှင့်အလွန်အကျွံသလိုပဲ. သို့သော်အချိန်ကျော်ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူပြည့်နှက်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပညာကိုပြသနိုင်ဖို့စတင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ခံစားမှုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်, နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အခြိနျးတှေ့. သငျသညျကိုလက်ထပ်ခံရဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဆိုရင်, ထို့နောက်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်မကောင်းတစ်စိတ်ကူးအသီးအသီးကိုအခြားသူများစိတ်နှလုံးကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့. ရှောလမုန်မင်း၏သီချင်းထဲမှာအကြှနျုပျတို့ဟာသူ့ရဲ့အချိန်မတိုင်မီနိုးဖို့မသတိပေးခဲ့သည်နေကြတယ်. အမျိုးသမီးများအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ကအရမ်းစိတ်ခံစားမှုသတ္တဝါတွေဖြစ်ကြပြီးဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့နှလုံးစောင့်ရှောက်မယ်လို့တစ်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပို့ချအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ခဲ့သူတစ်ဦးသည်လူကိုတွေ့သောအခါ, ငါတစ်ဂိုးသမားကိုတွေ့ကိုသိ :)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုးပန်းစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်နက်နက်နဲနဲပတ်သက်ဖြစ်အချို့သောလူမေးလျှင်. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်နိမိတ်မှတာဝန်ခံကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြှနျုပျတို့ရဲ့ဆကျဆံရေးအကြောင်းကိုပညာရှိသဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ကိုကူညီလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်ပင်စေ့စပ်တယ်ခင်မှာကျနော်တို့လည်းအိမ်မထောင်မီအကြံပေးခြင်းအားဖြင့်သွားလေ၏. ကျွန်တော်တို့ကိုအဟောင်းတွေ၏ပညာကိုရှာဘို့ခွင့်ပြုဤအရာနှစ်ခု, ထိုသို့နဲ့လက်ထပ်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးစိတ်ကူးခဲ့ဖြစ်စေမအကြောင်း သာ. ပညာညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအကြောင်းပြချက်အဘို့ငါတို့ဒေသန္တရအသင်းတော်မှသင်းအုပ်ဆရာများနှင့်လမ်းညွှန်ပေးတော်မူပြီ. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပညာရှိစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအားဖြင့်ထင်နှင့်တစ်ဦးဘုရားရေးရာပြင်ပမှာရှုထောင့်ပေးကူညီ. Relationships that are conducted in isolation are putting couples at serious risk of sin and unwise decision making. I would really encourage dating couples to have other believers from your community intimately involved in their relationship.
ကောလိပ်ကျောင်းတစ် freshman အဖြစ်ငါ Superwoman Syndrome ခေါ်ခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုခဲ့. ငါအရမ်းလွတ်လပ်တဲ့ကြီးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမောင်းထုတ်, လူတလိုအပ်နေ၏စိတ်ကူးရန်အလွန်ဆန့်ကျင်. ငါမောင်းနှင်လွတ်လပ်သောသို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ခြင်းမှားဘ​​ာမှမရှိမစဉ်းစားကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါ့နှလုံး၌ကထက်ပိုမိုခဲ့. ငါသည်လူနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ဘုရားသခရဲ့ဒီဇိုင်းကားအခဲ့သည်. ငါအသံကျယ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဖူးဘူးမယ်လို့, ဒါပေမယ့်ငါရိုးသားခဲ့လျှင်, ငါကမျြးစာကိုအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပြောတာပေါ့ထင်ရာနှငျ့စိတ်ပျက်ခဲ့. ကျနော်တို့အားနည်းများမှာ, ကျွန်တော်တို့သင်ပေးမနိုင်, ကျနော်တို့ဦးတည်သွားစေမနိုင်, ကျနော်တို့အိမ်သူအိမ်သား၏ဦးခေါင်းကိုမဟုတ်, နှင့်ငါ့အလွန်အနှစ်သက်ဆုံး, ကျွန်တော်တစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်ဝိညာဉျတျောရှိသည်ဖို့ရှိပါတယ်. ငါနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်ဝိညာဉျတျောဒါပေမဲ့ဘာမှခဲ့ထင်ငါသည်ငါ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ခဲ့. ဤအတှေးအအားလုံးသည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြန်ငါ့ကိုကိုင်ထားမယ်လို့တစ်ခုခုခဲ့ကြောင်းထင်ဖို့ကျွန်မကိုဦးဆောင်. ဒါဟာငါရှိခဲ့ပါတယ်ရှိသမျှကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအိပ်မက်တွေကိုလိုက်ရှာမှငါ့ကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်နှငျ့အခြို့သောနေ့၌ငါနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့ 10 and half babies onafarm somewhere.
ကျေးဇူးတင်စရာ, နှစ်ပေါင်းများစွာထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုဆုံးမသွန်သင်ခြင်းနှင့်တကယ့်တစ်ဦးဘုရားရေးရာအမြိုးသမီးဖြစ်တူအဘယျသို့အကြှနျုပျကိုပြတော်မူပြီ. တစ်ဦးဘုရားရေးရာအမြိုးသမီးဖြစ်ခြင်းသင်သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်သည်မဟုတ်သို့မဟုတ်မပွု. ငါသစ္စာရှိရှိတစ်ကော်ပိုရိတ်အလုပ်အတွက်သခင်အစေခံသောသူဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီအမျိုးသမီးများနှင့်အိမ်မှာသစ္စာရှိရှိသူတို့၏ကလေးများနှင့်ခင်ပွန်း၏အစေခံသောသူမရေမတွက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးသိ. Biblical womanhood is about understanding God’s unique role for us as women and delighting in the beauty of Gods design.
ငါကဘုရားရေးရာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးသင်ယူခဲ့ကြပြီးကျွန်မခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ငါ၏အလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖွငျ့ချချည်နှောင်မခံစားရဘူးအိမ်ထောင်သည်မိန်းမကဲ့သို့. လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတှကျဘုရားသခငျရဲ့ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောနှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့ဖြစ်၏. သိမှတ်ကြလော့နှင့်ယုံကြည်ငါ့ကို၏အသက်အရွယ်မှာလက်ထပ်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုပေး၏ 22. နှစ်ဦးနှင့်နှစ်ခွဲအကြာတွင်, ငါမဆိုနောင်တရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ငါထာဝရဘုရားသည်ငါတို့အိမ်ထောင်ရေးကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူရန်ဆက်လက်သာဆုတောငျးနိုငျ.
Jdharden1 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကအံ့သြဖွယ်င်, how God can write the most perfect love story to those who hand over the pen to him. သငျသညျဂျက်စီကာကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါတကယ်ကဒီလိုအပျ. This encourages me asa16yr old to submit to God and let him have his way in my love life. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ.
Jannon ပက်ထရစ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I LOVE THIS!! We are youth pastors atasmall church and I always tell the teens, “There are only two things you will ever do inarelationship… 1) Get Married 2) Break up. Breaking up hurts and creates baggage, so if you are not ready to get married, it’s best not to start inarelationship.” (Not that you don’t grow to be ready for marriage inarelationship, but I’m mostly talking to 13-16 yr olds.) Most people startarelationship thinking it will beasmall, shortlived, fun thing. But then feelings develop, you fall into sin, and then it’s harder than ever to get out. If we would protect the heart God Gave us as precious, and go at relationships from this perspective, the perspective of it ending up in marriage toaGodly man or woman, we would be far less hurt and broken by the time that Godly man or woman God has for us comes around! မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
Demonslayer4god777 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I’m really glad I clicked on the link to read this post. ငါဖြစ်၏ 25 and my husband and I have been married for nearly5အနှစ်. ယခု, I am the first to tell everybody that God is the reason we are married. Like you, တွင် 21, I was NOT looking for nor did I wantahusband, shoot I didn’t wantaboyfriend. 2007 was the year God completely changed my life. In January I had just discovered what God really wanted was relationship rather than religion so I was on high(spiritually) and zeal like nothing I had ever experienced before. Next thing I knowamonth later I was married. Crazy I know. But what can I say…God told us to do it. And five years later, we are still together, and growing together in Christ. ယခု, I wouldn’t advise to anyone to do it as rapidly as we did. But I wouldn’t advise against it, if you feel led by God, and have prayed and fast. I pray that God continues to not only grow your marriage but strengthen it. I pray that your love for each other also continues to grow. I bind up anything, anyperson, any spirit, that would try to divide you. I pray that you are blessed with great communication skills, and increased patience. May God keep you, in Jesus name.
Matt Novak • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Ariep17 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Wow this was really great! တစ်ဦးအဖြစ် 20 y.o. ppl look at me like im insane for having the desire to get married. I would love to see some expansion on what you mean by “emotionally pure.” I love the trasparency also in what you said. God bless yall
Philipns2511 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အများအားဖြင့်, when she says “emotionally pure” she’s talking more about not already in your mind trying to marry the guy or think that you are “exclusively” his just because you’re dating. That can lead to other sinful thoughts like, “sexual fantasies, lust,စသည်တို့ကို” You realize you’re emotionally impure when your vision of that other person’s character is so clouded that you make the relationship an idol in your own mind. That’s why Proverbs 4:23 is so important to live by,especially asawoman because we are, like was mentioned, “emotional” creatures.
Ariep17 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Kerai Riddle • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:56 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကိုကြိုက်တယ်!!!!!!!!! Sometimes you seem to forget that youre not the only one because so many around you mostly peers seem to think your “jumping the gun” so many people to me that i wasnt ready and im too young, but i truly believe this is what god had in store for me. I was scared out of my mind the day after because not only did i get married early at the age of 18 i also marriedaman i knew less thanayear and he was only 19. We hadainstant connection like our souls were destined to be together, i love him more now than i ever have hes my partner for life and i wouldnt change it for anything. We prayed together and went to church together got married and hadachild together now here we are..It will be3years in february and i still have no regrets that i made this move :-) god has blessed me withagood man.. My vows mean the world to me and i wouldnt break them.. Thanks for posting this keep it up i love young love… You hardly ever see couples last til death but i strive to be that couple til death do we part divorce is not an option!!
Adrienne Kelly • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:57 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
M.A.R.V. • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:57 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Louib2001 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:57 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျညီအစျကိုနှင့်သင့်လူငယ်သင့်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးအဘို့ကိုခြီးမှမျးသခင်ဘုရား. ငါသည်ထာဝရဘုရားသင်၏အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးစဉ်ဆက်မပြတ်မျက်နှာသာသွန်းလောင်းမည်ဆုတောင်း, သငျသညျသူ၏စကားကိုနာခံကြပြီ. ငါဖြစ်၏ 28 နီးပါးနှစ်နှစ်ယခုနဲ့လက်ထပ်နှင့်ငါ့ဇနီးနဲ့ကျွန်မတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာလက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ရှိပြီ 10 ပိုးရွအဟောင်းကလေး. အစဉ်မပြတ်ငါအငယ်ကိုလက်ထပ်ရချင်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါထာဝရဘုရားနီးပါးကိုငါ့ကောင်းသောအရာမှနှုတ်ဆောင်တိုင်အောင်ငါ့အဘို့သေးအချိန်မဟုတ်ခဲ့ယုံကြည်5လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ (တိကျသောဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယမွေးတယ်နေ့၌တွေ့ဆုံခဲ့ 31 ဒီဇင်ဘာ 2006). အတူတူဖြစ်လတ်ဘယ်မှာငါအသင်းတော်ကိုတစ်ဦးထံမှသာမန်အစ်မအဖြစ်သူမ၏ယူသကဲ့သို့ငါကျနော်တို့မသိခဲ့ပါ. ငါသည်လည်းငါ၏အဝိညာဏတိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်အာရုံခဲ့သည်, သူတို့သမိုင်းဆိုအဖြစ်ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကငါ့မျက်စိဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အရာကြွင်းလေ.
ဒါဟာလက်ထပ်ရမှမဟုတ်လူတို့အဘို့စာတန်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာတည်သည်, သူတို့အပြစ်၌နေထိုင်ပြီးကျနော်တို့ပြီးသားအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိနိုင်အောင်. ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကွာရှင်းနှုန်းမှာကြည့်ရှုကြပြီ? ဘယ်လိုအသင်းတော်၌ညီအစ်ကို, ညီအစ်မကိုမတရားသောမေထုန်ကိုအကြောင်း, သောကွောငျ့အဘယျသို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအာဏာရှင်၏.
ငါတို့သည်ငါတို့၏အမြို့မြို့ယနေ့လူငယ်အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိဘယ်လောက်မှာကြည့်ရင်, ကျနော်တို့အမြစ်အကြောင်းတရားများတချို့၏စဉ်းစားရန်ခဏယူကြပါ? ဤအမှုအလုံးစုံခွဲကျဆင်းမြို့ပတ်ရထားသဘေ်ာတွေအတွက်ယခုအချိန်တွင်လူကိုလဲလှယ်ဘုရားရေးရာတန်ဖိုးများ. တောင်မှခရစ်ယာန်မိဘများမသိဘဲလူငယ်ကိုလက်ထပ်ဖို့မမိမိတို့သားသမီးတားသဖြင့်မြို့ပတ်ရထားသဘေ်ာမြှင့်တင်ကြသည် (သိသာစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အသက်အရွယ်မှာ). အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကိုးကားငါရှိပါတယ်”သင်တစ်ဦးပညာရေးရနျလိုအပျ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်သင်၏သခင်ပြီးစီးခြင်းနှင့်လျောက်ပတ်သောအလုပ်ရှိတဲ့အခါ, ထို့နောက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုစဉ်းစားရန်စတင်”. အသံသောသူသည်ပညာရှိကြောင့်မ ? ဒါကြောင့်အဘယျသို့သင်တို့၏ခရစ်ယာန်ကလေးတက္ကသိုလ်မှဝင်သောအခါဖြစ်ပျက်ပြီးတော့ဘယ်သူ၏လည်းကောင်းခရစ်ယာန်သို့မဟုတ်မဟုတ်တဲ့ကောင်လေး / မိန်းကလေးအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူရှိလှုံ့ဆျော?
ငါ့ကိုမှားရပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး(့ငါကိုဖြတ်ပြီးလာကြပြီအရာအချို့ရဲ့), အထက်ပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အပေါင်းတို့အားလျှောက်ထားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. သူတို့အလုပ်လုပ်နှင့်၎င်းတို့၏အနာဂတ်မိသားစုများစသည်တို့သည်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်တဦးတည်းကသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များအတွက်အသိပညာရရှိသည်အဖြစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်, ဒါပေမယ့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား wont ဘဝတစျခုတှငျအစဉျအမွဲဧရိယာအတိုင်းလိုက်နာမှရွေးကောက်ပြီးဘာဆက်ခံမှတဦးတည်းကိုရပ်တန့်, တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်အိမ်ထောင်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်း i.e ကြီးမြတ်ဝန်ကြီးဌာနကိုအားပေးအားမြှောက်, ကောင်းသောရှိသောသစ်ပင်ခြောက်, စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်စာရင်းအပေါ်တတ်. နှစ်ဦးသားတကိုယ်တည်းဖြစ်လာသည်နှင့် လိုက်. နိုင်အောကျမေ့ 10 000 ဝိုး, ကြောင်းအစဉ်အဆက်သူတို့သစ္စာရှိရှိသညျဘုရားသခငျကိုမေးဘယ်သို့စပ်ဆိုင်ထဲမှာသူတို့မမှီမည်ဟုဆိုလိုသည်, ကြောက်မက်ဘွယ်သော…..
အနီးကပ်၌ငါကျနော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကိုဘုရားသခင်အဘို့ပထမဦးဆုံးလူနေမှု၏အရေးပါမှုအပေါ်လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာငါတို့သားသမီးဆုံးမဩဝါဒပေးစတင်ရန်နှင့်ဒုတိယအလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အရေးပါမှုအဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုချင်ပါတယ်( ဆုကြေးဇူးကိုပေးသနားခဲ့ကြရတယ်သောသူတို့အဖို့) သူတို့ကဒီဒေသမှာဘုရားသခင်နှစ်သက်လိုကြီးပြင်းလာနိုင်အောင်. နောက်တကြိမ်ကောင်းစွာငါ့အစ်ကိုပြုသောအမှုတို့ကိုဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသကျရှငျအားလုံးသူတို့အား. မင်္ဂလာရှိသောနေပါ.
Iwantstate01 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:58 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂျက်စီကာ, could you share some of the practical things Trip did during your courtship to guard your heart EMOTIONALLY. I understand setting physical purity boundaries. But what did it look like practically in the emotional area?
Purposedrivenjc • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:58 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Kory Hagler • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:58 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Robert Rivera • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လှသောအဆင်း!! God bless you guys!! အလွန်အားတက်စရာ…
Punchyko • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး!!! good stuff, thanks so much for posting this blog! ကြေးဇူး&peace 0=)
Katherine2c • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I so NEEDED to read this!!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!! I struggle with the things you once struggled with and I want to honor the Lord and my husband!!!! သူကပြောပါတယ်ခံနှင့်အတူ, I will continue to strive to be that P31 wife!!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
Paul WenChih Anibal • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ChosenV • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Chelster • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Nicole-Rose Munhawa • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Kayla_brown_1 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Godgiven51 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Iolene_Branch • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I also had no intentions of searching foraman to spend the rest of my life with at 20 အသက်အနှစ်, but here I am, and this blog is extremely encouraging. For me to stand beside him in all his endeavors and be the woman God created me to be and be by his side as God molds him to be the man he needs to be.
ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. I really do appreciate it :)
Arnold Mofor • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Whao, Trip and Jessica! You actually do not know how far your lessons are reaching-I am in Cameroon. ငါဖြစ်၏ 25 yr-old and recently tookaday in extended time with God to seek God concerning my future partner. Then I came up withachecklist/ Prayer points list of the kind of woman I want to date and eventually marry. Thenaday later I met your blog. I think God is preparing me in special way. This is my Wife’s Checklist/ prayer points list:
Angela Johnson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
WhataBlessing You Both Are! Keep On Keeping On With HIM! You Won’t Go Wrong…..အစဉ်! I got married young but without the wisdom of HIM and others who were led of The Spirit to encourage us to seek HIM first……I must say that anyone who chooses HIS Way will be positioning them selves to receive HIS Plan for them and not their plans for themselves which is Far Greater than Anything we could ever “think of” for ourselves….TRUST IN HIM!:) I am walking by Faith and not by Sight (2 corinthians 5:7) Or I would have killed my self……Without HIM I saw no good thing. Thank You LORD For Sending The Holy Spirit Who Comforts and Guides me. JESUS Is LORD! ( I am still married and we Both <3 The Lord!) Stay Blessed!:) Much <3 and Peace!:) Very Inspiring of you both to have posted, Thank You Very Much!:)
aneetarh • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
thank u so much Jessica,dis is exactly wot i need right nw. God rilly bls u guys. I’m 21,inagodly relatnshp n my boyfriend wants us2get married ASAP. I wasn’t sure if it’sagud idea cause i felt i wasn’t matured enuf bt i thank God4dis,if it’s God’s will den i totally subscribe2က
Rchllnndreher • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
WOW the reasons behind you getting marride are the same as mine were and what still make me believe I made the right choice I also felt God saying this is the one it is time to let go of the past only our pastor didnt approve which made itahard choice inaway other than I was following God. ငါရယ် 22 and just got married2mo ago. It may beashort time but God is growing us together and teaching us so much(for me how to open up be soft and beawoman as God created me to be) It was awsome to read this and I want to thank you for taking the time to write it. May God Bless You and Your House!
Rachel Wright • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Dfletcher812 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I Totally Agree. ငါ၏အသက်အရွယ်မှာလက်ထပ်တယ် 18. Yes I wasababy but, the Lord spoke to me and told me not be afraid to takealeap of faith and being Obedient to the will of God i did. Now Im 24 with Three Kids and my Husband and I are very deep in ministry of music. God has done some impossible things in our lives and I love to hear that other young women and young men of God realize that God has given their soul mate to them and deiced to make the right decision.
Grabiel Rivera • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
thats great the same has happened to me and my wife , i was 21 သူမဖြစ်ခဲ့သည် 18. we let god direct us and be in our marriage and now he showing us his work in our lifes and in our marriage. may god keep blessing yah marriage like he has done in ours god bless
Addis Hunter • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Thank you for your testimony, I can relate to you in many ways. I do have to admit that I struggle daily with “havingagentle and quiet spirit” part of marrige..Like you, I was and still am very driven and independant , and acknowledging my husband as the head of household and submitting to his ideas (even when I dont agree) is my biggest challenge asayoung wife. I ask God every day to help me humble myself and submitt to my husband in every way. ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Cy Hudson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Jennifer Ann Seller • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
21 အသက်အနှစ်, and I feel like you’re describing me. I definitely have that Superwoman Syndrome. Thank you so much for your inspiring testimony, it gives me hope :)
Orinthea Mckenzie • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Pulemolise • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
thnx alot Trip and Jessica,many adults nid2see dis,i m truly encouraged by you guys,I luv hw ur sides complement,-Trip metagodly woman and Jessica metagodly man,ဝိုး!(dats why u had2လက်ထပ်ရန်,ဟားဟား!) nd we thnk God4u guys,u hv shown dat u canbresponsible adults atayoung age wen adults at an older age cant evn manageafraction of wat u r doing,big-ups2u,nd may God continue2bles ur marriage more and more with each day dt comes
Uyi Ewansiha • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
simon paul -----uk • နိုဝင်ဘာလ 9, 2013 တွင် 5:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Kaila • နိုဝင်ဘာလ 14, 2013 တွင် 9:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I know this was written awhile ago and I finally gotachance to read it. ဒါပေမဲ့, I guess this wasagood time for me to read it. Seems like God keeps putting little things around to tell me it’s time to put him back into things. And I think not only my relationship with my boyfriend is what’s needs Him back in it, but this shows that He can help smooth things out.
Colton • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2014 တွင် 5:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟေ့ခရီးစဉ်! I read both of these blogs, and they (along with the godly counsel of family and friends) have been immensely helpful to me in the past few months. I’ve met the girl that I know God has for me to marry, and we’re just waiting on his timing. It’s quite possible that we will end up married even before you were, or at least by then!
Nadene • မေ 24, 2014 တွင် 5:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
This was beautiful. Can’t express how much I needed this :''). God is truly faithful!
Myles • စက်တင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Femi • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2015 တွင် 1:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Lily • ဇွန်လ 11, 2017 တွင် 12:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်